Biciid lagu rakibayo aalad casri ah si looga illaaliyo bahalada - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka ACTILITY
Image caption Biciidka Barafka oo lagu xirey qalab u eg koorta
Dadka dhaqda biciidka ku nool dhulka barafka ah ayaa la yimid xirfad cusub oo ay ku badbaadinayaan noolahan hayinka ah.
Waxaa lasoo saaray galab sida koorta oo kale ah oo qoorta loogu xirayo biciidka, kaas oo la shaqaynaya taleefoonka qofka mulkiilaha ah, wuxuuna ku ogaanayaa marka biciidka lasoo weeraro, ama uu dhaawacmo.
Bahalada aadka u ugaarsada biciidkan waxaa ka mid ah yeeyda, madax-kutiga iyo mukulaal-duureedka.
Aaladdan cusub ayaa waxa ay xitaa saamixi doontaa in hadhoow lagu helo bahalkii weerarka geystay.
Booliska Finland oo baaraya weerar ka dhacay magaalada Turku
Biciidkan ayaa sidoo kale ku dhinta shilalka baabuurta maadaamaa ay waddooyinka si lama filaan ah usoo galaan.
Dadka dhaqda biciidkan ayaa ogaaday in ay habboontahay in qalabkan lagu xiro neefka dhediga ah, taas oo hubanti ka dhigaysa in la helo halka ay joogaan raxanta wada socota markaas.
Image caption Biciidkan ayaa ku nool dhulka barafka ah
Qalabkan uma baahna xitaa in uu ku jiro goobta adeegga ee qadka taleefoonka, xitaa isaga oo ka baxsan ayuu shaqayn karaa, xitaa haddii dabka ka dhacsanyahay, waxaana lagu ogaan karaa halka ay xoolahan ku suganyihiin waqti xaadirkaas.
Matti Sarkela oo madax ka ah ururka dadka dhaqda biciidka barafka ee dalka Finland ayaa sheegay in qalabka uu wali yahay mid weyn, ayna rajaynayaan in ay helaan aalad fudud.
"Waxaan u baahanahay qalab shaqayn kara muddo sanad ah, dab yar ku shaqayn kara, aaladaha jihooyinka oo horumarsan lagu xiray, waanan ka shaqaynaynaa in ay taas dhacdo" ayuu yiri Matti.
Qalabkan ayaa ka dhashay curinta aaladaha casriga ah ee maalin kasta adduunyada kusoo kordhaya, loogana faa'iideynayo isticmaalka bini'aadamka iyo baahiyada kala duwan.
Image caption illaa 300,000 biciid ah ayaa dalka Finland ku nool oo la dhaqdaa
Dhaqashada Biciidka Barafka waa ganacsi aad u weyn gobolka Lapland ee dalka Finland, waxaana la qiyaasaa in ay ku noolyihiin illaa 300,000 oo neef, waxaana laga macaashaa lacag dhan $25 milyan oo doolar oo ka dhalata hilibkiisa, dhogortiisa iyo waxyaabaha kale ee laga sameeyo.
Sanadkii hore illaa 100 xayawaankan ayaa ku dhintay shil tareen oo ka dhacay dalka Norway.
Waxyaabaha kale ee uu xayawaankan caanka ku yahay ee loo adeegsado ayaa ah in lagu xiro rimoor barafka loogu talogalay, kadibna sidii gaadiidkii loo raaco xiliyada ciidda masiixiga.